जन्मदिन मनाउदै गर्दा किन भाबुक भए धुर्मुस सुन्तली यस्तो छ कारण ? भिडियो सहित - info4nepal
जन्मदिन मनाउदै गर्दा किन भाबुक भए धुर्मुस सुन्तली यस्तो छ कारण ? भिडियो सहित
रौतहट । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका उपाध्यक्ष तथा हाँस्यकलाकार कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले मुसहर बालबालिकासँग आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छन् । रौतहटको सन्तपुरमा रहेको मुसहर बालबालिकालाई स्टेशनरी सामग्री वितरण गरेर जन्म दिन मनाएकी हुन् ।
अहिले बस्तीमा रहेको करिव ५६ बालबालिका नियमित विद्यालय जान थालेका छन् । बालविवाह, अशिक्षा, गरिबीलगायतका समस्यामा रहेका मुसहर समुदायमा धुर्मुस सुन्तली प्रवेश गरेपछि निकै परिर्वतन आएको छ ।बस्ती हस्तान्तरण गरिसक्दा मुसहरहरुप्रतिको माया अझै बढेर गएकाले जन्मदिन मनाउन धुर्मुसलाई लिएर रौतहटको सन्तपुर आई पुगेको कुञ्जना घिमिरेले बताइन् ।
सुन्तलीको जन्म दिनमा संयोगबस मुसहर बस्ती अवलोकनका लागि आएकाहरु पनि निकै खुसी थिए ।
बिद्रोह नै चाहिएको भए आर्मी लिएर लड्न आउ – नेबिस
पुष १६ हैन त्यॊ भन्दा चाडै पुग्छन जस्तो छ पानीजहाजमा कलकत्ता
दुखद खबर : हार्दिक श्रदान्जली , फेरि घट्यो येस्तो दुखद घटना